In Actualidad iPhone waxaan ku qaadan muddo ka badan 10 sano ka warbixinta maalin kasta oo ku saabsan wax kasta oo la xiriira Apple, qaab wararka, casharro, falanqeyn, dib u eegis, codsiyo, nabadgelyo iyo wax badan oo dheeraad ah adigoon ilaawin walxaha, taas oo noo ogolaatay inaan noqono mid ka mid ah baloogyada loogu akhriska badan yahay Isbaanishka ee la xiriira Apple.
Kooxda Actualidad iPhone waxay ka kooban tahay koox ka kooban daabacayaasha khibrad balaaran u leh wax soo saarka Apple. Xaqiiqdii, inbadan oo naga mid ah waxay sii wadaan inay qabtaan iPhone-keena ugu horeeya sida dahabka maryaha saaran. In our blog waxaad ka heli kartaa xal u ah dhibaato kasta, la yaab leh sida ay u muuqan kartaa, iyada oo loo marayo qaybta tababarka. Haddii aadan helin, waxaad la xiriiri kartaa midkeen si aan si wadajir ah isugu dayno inaan xal u helno.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa falanqayn dhammaystiran, iyada oo loo marayo kanaalkayaga YouTube, dhammaan alaabooyinka ay Apple billowdo suuqa sannad kasta. Intaa waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale falanqeyneynaa furitaanka xarumaha ugu muhiimsan ee tartanka tooska ah uga socda Apple, sameynta isbarbardhigyo iyo falanqeynta qodobka faa iidooyinka iyo qasaaraha ... iyadoo aan lumin dhex-dhexaadnimada waqti kasta.
Kooxda tifaftirka ee Actualidad iPhone waxay ka kooban tahay koox ka mid ah Khubarada iPhone kana yimid Apple.
Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto kooxda Actualidad iPhone, buuxi foomkan
Bachelor of Medicine iyo dhakhtarka carruurta ee xirfad shaqo. Isticmaalaha Apple tan iyo 2005, markii aan iibsaday Nano iPod-kii iigu horreeyay. Tan iyo markaas, dhammaan noocyada kala ah iPhone, iPad, Mac, AirPod, Apple Watch waxay dhex mareen gacmahayga ... Xulasho ama daruuri, waxaan ku baranayay wax kasta oo aan aqaan anigoo ku saleynaya saacadaha akhriska, daawashada iyo dhageysiga dhammaan noocyada waxyaabaha la xiriira. Apple, waana taas sababta aan u jeclahay inaan kula wadaago waayo-aragnimadayda barta, kanaalka YouTube-ka iyo Podcast-ka.
Markii ugu horreysay ee aan dunida kusoo biiro Apple waxay ahayd iyada oo loo marayo MacBook, "caddaanka". Waxyar kadib, waxaan iibsaday 40GB iPod Classic ah. Ma ahayn illaa 2008 markii aan u boodboodayay iPhone-ka iyadoo moodalkii ugu horreeyay ee Apple la sii daayay, kaasoo si dhakhso leh ii ilaaway PDAs. Waxaan qorayay wararka iPhone muddo ka badan 10 sano. Waxaan marwalba jeclaystay inaan la wadaago aqoontayda iyo waxa ka fiican sida Actualidad iPhone loo sameeyo.
Tifatiraha, geek iyo jacaylka Apple "dhaqanka". Sida Steve Jobs uu dhihi lahaa: "Naqshadeynta kaliya ma ahan muuqaal, naqshadeynta waa sida ay u shaqeyso." Sannadkii 2012 kii iPhone-kii iigu horreeyay wuxuu ku dhacay gacmahayga tan iyo markaasna ma jiro tufaax isoo diiday. Si joogta ah u falanqaynta, tijaabinta iyo ka aragtida aragtida muhiimka ah waxa Apple ay tahay inay na siiso labadaba heerka qalabka iyo barnaamijka. Ka fog noqoshada Apple "fanboy" waxaan jeclahay inaan kuu sheego guulaha, laakiin waxaan aad uga helay khaladaadka. Waxaa laga heli karaa Twitter ahaan @ miguel_h91 iyo Instagram sida @ MH.Geek.
Salaan! Waxaan kubilaabay aduunyada Apple kumbuyuutarka 'iPod Shuffle', wax walboo waxay ahaayeen wax cajiib ah, suurtagalnimada inaan kugula yaabto heeso aan kala sooc lahayn oo aad ku dartay liiska iTunes. Kadib waxaa yimid iPod Nano, iPod Classic, iyo iPhone 4 ... Aniga oo xiisaynaya nidaamka deegaanka ee loo yaqaan 'Cupertino ecosystem' waxaan ka helay meesha aan ku leeyahay 'Actualidad iPad', ka dib waxaan u boodnay Actualidad iPhone koox aad u tiro badan oo aan la wadaago "geek "ee Cupertino, oo aan sii wado inaan barto maalin kasta. Ka go'? Haa, laakiin qalab Apple ah 😉
Waan jeclahay aaladaha elektarooniga ah, iyo gaar ahaan kuwa calaamadda Apple. Balwadayda weyn ayaa dhagaysanaysa dhammaan noocyada muusigga ee iPhone-kayga, sababo laxiriira tayada codkeeda weyn, in kasta oo aan sidoo kale ku raaxaysto tijaabinta barnaamijyo kala duwan oo laga yaabo inay waxtar leeyihiin mar uun.
Naqshadeeye iyo jimicsi, jecel internetka, tikniyoolajiyadda cusub iyo dunida Apple. Waxaan si joogto ah u qoraa oo wax uga bartaa isbeddelka iPhone-ka iyo wax kasta oo la xiriira astaantan, oo aan marwalba diiwaangelinayo.
Saxafi ku takhasusay iPhone. Waxaan u socdaalaa adduunka anigoo ka raadinaya aalado cusub astaantan weyn, taas oo ay suurtogal tahay in lagu sameeyo waxyaabo yaab leh oo nolol fudud lagu helo.
Louis ee Doonta
Apple jecel teknolojiyada oo doonaya inuu la wadaago aqoonta oo uu ka barto kuwa kale. Waxaan isku dayaa inaan ku dhejiyo hamiga wax kasta oo aan qabanayo, sidaa darteed waxaan rajeynayaa in taladayda ay kaa caawin doonto inaad horumariso khibradaada iPhone-ka.
Waqtigan xaadirka ah waxaan u heellannahay adduunka blogger iyo abaabulka dhacdooyinka. Waan jeclahay internetka, iyo waliba wax kasta oo xiriir la leh Apple. Waan ku raaxeystaa barashada tabaha cusub ee iPhone sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan shaaca ka qaado dhamaan tabaha aad ka heli karto taleefankaaga casriga ah.
Had iyo jeer u hamuun qaba barashada iyo barida. Waxaan jeclahay inaan ka warbixiyo wax kasta oo aan ogahay, iyo tan, oo lagu daray xaqiiqda ah inaan marwalba la socdo iPhone, waxay iga caawineysaa inaan sifiican ugula xiriiro wararka astaantaan
Waxaa i dhaqaajiyay jacaylka loo qabo teknolojiyadda Apple, oo ah nooc aan khibrad ballaadhan u leeyahay, adeegsiga qalabka iyo dukumiintiyada ku saabsan alaabooyinka ay ka midka yihiin iPhone. Waxaan had iyo jeer la socdaa qorista warbixinnada ugu fiican iyo wararka.
Jacaylka tikniyoolajiyadaha cusub, iyo adeegsadaha macruufka iyo OSX. Dabcan, waxaan ahay taageere Apple, waana taas sababta aan ugu qoro majalladan si ay akhristayaashu uga feejignaadaan wararka ugu wanaagsan ee iPhone.
Qorista iyo iphone-ka ayaa ah laba dareenkayga. Iyo tan iyo 2005 waxaan nasiib u yeeshay inaan isku daro. Waxa ugu fiican dhammaan? Weli waan ku raaxaystaa sida maalinta ugu horreysa ee aan uga hadlayo wax kasta oo cusub oo Apple ay suuqa u keento taleefannada iPhone-ka.
Waxaan ahay nin jecel dunida Apple. Waan jeclahay barashada illaa inta ay ku saabsan tahay maadooyinka aan jeclahay ama muhiimadda u leeyahay. Sidaa darteed, qoraaladayda waxaad ka heli doontaa waxyaabo faa iido kuu leh maalinba maalinta ka dambaysa iPhone-kaaga.
Suxufiga wuxuu aad u xiiseeyaa qalabka iyo taleefanka gacanta. Marwalba waan la socodsiiyaa wixii ku saabsan iPhone, iPad, Apple Watch iyo MacBook Pros, sidaa darteed hadafkeygu waa in dhammaan akhristayaasha ay ka warqabaan wararka.